Olee otú Detuo iTunes Playlist na mpụga ike mbanye
> Resource> iTunes> Olee otú iji Detuo iTunes listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye
"Ọ bụ na a ụzọ idetuo iTunes listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye na songs? M hụrụ n'anya music na nwere ike ọtụtụ nke listi ọkpụkpọ na iTunes. Ebe ọ bụ na m iTunes enyene ukwuu ohere, m kwesịrị iṅomi akpali ụfọdụ iTunes playlist na mpụga ike mbanye . Biko nye m aro ụfọdụ, biko. "
Amaghị m ma ị na-na na na-agbalị iṅomi iTunes listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye ma ọ bụ. Kasị eri si Internet ga-agwa gị nyefee iTunes playlist faịlụ .xml gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị kpọfere iTunes playlist faịlụ .xml gị mpụga ike mbanye, ị ga-ahụ na ọ dịghị music na nchekwa ma ọlị, kama naanị .xml faịlụ. Na-ewere na nche nke gị iTunes listi ọkpụkpọ echiche, ị kwesịrị ị na nyefee iTunes listi ọkpụkpọ na mpụga ike mbanye na songs na ya. Ke ibuotikọ emi, m ga-ịme ka ị otú iji Wondershare TunesGo idetuo iTunes playlist na mpụga ike mbanye na songs.
Download ikpe mbipute nke TunesGo!
Wondershare TunesGo (Windows) e mere maka Windows PC. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na PC na-agba ọsọ na Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, na Windows Vista. Nweta ikpe mbipute maka kọmputa gị na-eso nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú idetuo iTunes listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye. TunesGo-akwado ndị niile iOS ngwaọrụ na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6 na iOS 5.
Nzọụkwụ 1. mmekọrịta iTunes music na iOS ngwaọrụ
Mbụ na nke kasị, biko mmekọrịta iTunes listi ọkpụkpọ na ị chọrọ iṅomi na mpụga ike mbanye ka onye gị na iOS ngwaọrụ. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ na kọmputa na ẹkedori iTunes. Pịa View> Gosi sidebar. Pịa gị iOS ngwaọrụ na hapụrụ sidebar na Music taabụ na n'elu nke window. Họrọ chọrọ listi ọkpụkpọ na mmekọrịta ha gị iOS ngwaọrụ. Na mgbe ahụ ikwunye na gị mpụga ike mbanye na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Run TunesGo
Kwụsịkwanụ iTunes ahụ na mbụ na-agba ọsọ MobileGo maka iOS na kọmputa gị. TunesGo ga-amata gị iPhone ozugbo na-egosipụta ya na isi window. Site n'aka ekpe window, ị pụrụ ịhụ ihe aha ya bụ ka 'Playlist'.
Nzọụkwụ 3. Copy iTunes listi ọkpụkpọ iji mpụga ike mbanye
Pịa 'Playlist' ikpughe niile iTunes listi ọkpụkpọ na youc've synced gị iOS ngwaọrụ. Họrọ chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa triangle n'okpuru Export na. Site Mbupụ na dobe-ala ndepụta, họrọ "Mbupụ na My Computer". Chọta mpụga ike mbanye na ị na plugged na kọmputa gị na-zọpụta ndị a listi ọkpụkpọ na ya. Onye ọ bụla playlist aha ga-aha nke nchekwa nke e dere songs.
Ntak download TunesGo nyefee iTunes listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye maka ndabere? Ọ bụ nnọọ mfe. Site n'ime nke a, ị ga-mgbe nchegbu banyere adịkwa listi ọkpụkpọ na iTunes.
Olee ka jikota iTunes ọba akwụkwọ